Ampitomboy ny fifamoivoizana amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny Publish Times | Martech Zone
Ampitomboy ny fifamoivoizana amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny Publish Times
Alatsinainy Oktobra 17, 2011 Alarobia, Oktobra 26, 2011 Douglas Karr
Rehefa nanohy niasa izahay mampitombo ny fifamoivoizana ny taona lasa, iray amin'ireo faritra nojerentsika tsara ny ora amin'ny famoahana lahatsoratra bilaogy. Fahadisoana ataon'ny olona maro dia ny fijerena fotsiny ny fifamoivoizany isaky ny ora ary ny fampiasana azy ho torolàlana.
Ny olana dia ny fahitana ny fifamoivoizana isaky ny ora ao aminao Analytics ny fifamoivoizana dia mampiseho ny zotram-potoana misy anao fotsiny fa tsy ny faritra misy ny mpijery. Rehefa nanaparitaka ny fifamoivoizana izahay tamin'ny faritry ny vanim-potoana, dia hitanay fa ny fitsangantsanganana manan-danja indrindra dia ny zavatra maraina. Vokatr'izany, raha mamoaka amin'ny 9AM EST isika dia efa tara. Raha eo amin'ny faritra afovoany, Pasifika na faritra hafa ny tranokalanao na bilaogy… dia te-handahatra lahatsoratra iray ianao hamaky amin'ny 7 ora sy sasany ka hatramin'ny 30ora maraina alina maraina mba hitarika ny fifamoivoizana sy ny fizarana sosialy betsaka indrindra.
Toy izany koa, rehefa mijery hamoaka lahatsoratra amin'ny tolakandro isika, dia mila mahazo antoka fa tsy hanao azy aorian'ny 5PM EST, raha tsy izany dia olona maro no tsy hahita ity lahatsoratra ity raha tsy ny ampitso. Raha hamoaka lahatsoratra 3 ao anatin'ny iray andro izahay, dia te-hamoaka azy ireo alohan'izay fa tsy hampiakatra ny fampidirana ny atiny. Raha any amin'ny zotram-pasifika Pasifika ianao dia te-hamoaka eo anelanelan'ny 4:30 maraina PST sy 2PM PST! Ka… ianao indrindra no mianatra mandahatra fotoana raha tsy te hatory kely ianao!
Antontan'isa momba ny fizarana ara-tsosialy
Antontan'isa momba ny fandefasan-kafatra an-tsoratra iraisam-pirenena
Oct 17, 2011 amin'ny 9: 33 AM
Nanontany ny mpanjifa iray vao haingana ny fotoana tokony hizarana atiny. Fanontaniana lehibe io ary tena mety miovaova arakaraka ny mpihaino kendrena. Raha mikarakara olona eny amin'ny oniversite ianao dia mizaha Internet amin'ny fotoana samihafa noho ny 9-5'ers. Ny filanao tsara indrindra dia ny fanaovana fitiliana hahitana izay mety indrindra.
Oct 17, 2011 amin'ny 10: 29 AM
Nick - marina ny anao. Miankina tanteraka amin'ny mpihaino! Vao mahita olona tsy miraharaha timezones fotsiny aho ary tsy tsapako fa misy fahasimbana eo amin'ny fifamoivoizana rehefa miala amin'ny faritra ka hatramin'ny faritra isika.
Oct 17, 2011 amin'ny 10: 46 AM
Lohahevitra lehibe sy mifanaraka amin'ny zavatra hitantsika. Tsara kokoa ny manompo anao alefa amin'ny alàlan'ny fifamoivoizana isan'andro fa tsy mandritra ny fotoana.
17 Okt 2011 amin'ny 9:49 PM
Hitako ny fifampiraharahana tsaratsara kokoa niseho tamin'ny maraina. raha mandahatra ireo bitsika na fanavaozana facebook ho an'ny orinasako na ny mpanjifako aho. Misaotra nizara ity Doug.